Aterineto ao Iran: Ranomody sy ny tahotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2019 4:23 GMT
Nanangona ekipa matihanina ny Gerdab mba handinika ny aterineto. Ny tanjona dia ny hahatratra ireo tranonkala sy bilaogy mpanohitra amin'ny alalan'ny fitoriana sy/na fanelingelenana azy ireo. Hiteraka loza tsy mbola nisy toy izany eo amin'ny fiarovana sy ny filaminan'ny bilaogera Iraniana izany ary dingana hafa manohintohina ny fahalalahana miteny amin'ny aterineto.
Araka ny filazan'ny Gerdab, tsy tokony hisy toerana ho an'ny tranonkala sy bilaogy izay tsy manaraka ny fitsipiky ny mpitarika faratampony, ny Ayatollah Ali Khamenei ao Iran. Na izany aza, nanipika ihany koa izy fa taorian'ny fifidianana feno hosoka tao Iran, dia nampiharina ny politikan'ny tsiambaratelon'ny fitondrana, mba hampidirana rafitra vaovao izay manafina ny fanitsakitsahana ataony.
Manohitra mafy ny foto-kevitra tandrefana ny Gerdab. Manohitra ireo karazana tranonkala tambajotra sosialy toy ny Facebook sy ny twitter, izay heverina ho toy ny fitaovana mitetika ny fanonganana ny fitondrana. Ankoatra izay, amin'ny filazàna fomba fijery tsy dia tsara loatra amin'ny aterineto, dia nilaza ny Gerdab hoe “te-hanivana ny aterineto izahay mba hitazonana ny tanorantsika ho madio sy afaka amin'ny zava-dratsy”.
Nanamarika ny Gerdab fa mampiasa aterineto ny firenena Tandrefana toa an'i Etazonia sy Israely ho fitaovana hanovàna ny sain'ny olona. Manambara ihany koa izy fa amin'ny fifantohana amin'ny raharaha anatiny ao Iran, ny paikady fampiasana ny aterineto dia mikendry ny hanakorontana ny firenena sy hanonganana ny fitondrana. Noho izany, mandrisika ireo mpiserasera Iraniana mba hitandrina tsara sy tsy hamoaka hevitra mitsikera ao amin'ny aterineto ny Gerdab.
Amin'ny ankapobeny dia hita fa napetraka ny tranonkala Gerdab mba hamoronana tahotra sy ahiahy eo amin'ny olona ary hanaraha-maso ny fampiasan'ny olona ny aterineto. Manana lahatsoratra maro loatra izy mba hanakorontanana ny olona momba ny aterineto sy ny voka-dratsiny eo amin'ny fiainana andavan'andro.